Monstera - isitshalo enhle ukuthi likhule abatshali eziningi ekhaya in zokugcina. Ngezinye izikhathi Entela kubhekiselwa kuye ngokuthi "isilo", njengoba ukuhunyushwa igama lakhe Latin. Mhlawumbe umvini isidlaliso kwakubangelwa Umumo wabo ezihlotshisiwe nosayizi, okuyizinto ngempela umxhwele endaweni yazo yemvelo.
Namuhla, kunezinguqulo ezingaba ngu-amahlanu kweshumi zezitshalo, kodwa ezimweni eziningi esezikhulile kuphela eyodwa - Monstera lacquer ezikhangayo noma, njengoba kuba isitshalo ephansi yesondlo lokho kusheshe avumelane nendawo ezikuyo. Lolu amazing umvini bomdabu siye eNingizimu Melika, likhula emahlathini asezindaweni ezishisayo nasezindaweni lapho ifinyelela osayizi kufike ku 10-12 m.
Namuhla, hhayi kuphela e zokugcina izithombo conservatories, kodwa futhi izibhedlela, emahhovisi, emabhange nasemakhaya abo kungabonwa zalesi sihlahla ngale Monstera. Lokuzaliswa lokhu imbali Akudingi mzamo okhethekile, ngakho ezitolo ezikhethekile nezimakethe ezithengisa izinto izitshalo zayo. Uma othile kakade unekhaya esekhulile Monstera, cuttings yayo noma ichopho lungasetshenziswa sikhule izitshalo ezintsha.
Abaningi uyazibuza kanjani asakaze Monstera. Kunezindlela ezintathu. Indlela elula wabo ukusika stem noma cuttings apical. Ukuzisika akuwona engcono kakhulu yokwenza ezinyangeni entwasahlobo, kuyobe sekuba i-cishe oqinile futhi amelana izifo isitshalo. Ukwabelana akanayo ukuba ne amaqabunga, kodwa Imi kumele kwenziwe ngezansi nje kwefindo nge izimpande sendawo nommese obukhali kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, emoyeni Kuyoba khona impande main.
Ukwabelana kungenziwa efafazwe carbon yasebenza, umlotha, noma isici sokukhula. Khona-ke kumelwe ibekwe emanzini noma emhlabathini okulungiselelwe enwetshiwe ubumba noma isihlabathi. Kungenjalo, ungase ufake inqubo phakathi moss ezimanzi. Ukushisa nomswakama - yilokhu uthande Monstera. Ukubuyabuyelela kanye impande enzakala ngokushesha uma Isiqu wafaka teplichku amathini noma esikhwameni plastic.
Monstera futhi eveza kahle emoyeni Bokuhlela. Ukuze wenze lokhu udinga mpahla stem moss, upulasitiki futhi uvikelekile ku-ke bonke ngocingo. Ngemva kwenyanga, lesi sitshalo bakheke, kulapho-ke ungakwazi kakade kwehlukaniswa monstera omdala.
isitshalo esincane kumele repotted ngonyaka. Lapho kokufinyelela eminyakeni ewu 4 ukudluliselwa senzeka kanye eminyakeni emibili noma emithathu.
imbali abatshali abaningi abanesifiso ukuze ufunde indlela akhule kusukela imbewu Monstera futhi ukuthi lokhu kungenzeka. inketho okunjalo ungokoqobo, nakuba kuzothatha isikhathi eside. Kumele kuqashelwe ukuthi kusukela imbewu etholwe Monstera zikanokusho. Ukubuyabuyelela yinoma yimuphi Kulezi zindlela ezingenhla, akuzona zabasebenzi ngokuphelele futhi kahle, kube nokubambisana.
Ukunakekela Monster njalo sishaye, ayakhala, efaka umquba umquba. Kusukela bomdabu umvini ukubhekisela emahlathini asezindaweni ezishisayo, ithanda umswakama, ukuchelela ngamanzi afudumele. isitshalo Photophilous, kodwa elangeni eliza ngqo kungcono ukuba angaweli. umuzwa Mangalisayo kuzo zonke izindawo, ngaphandle zibheke eningizimu. Kusukela ngo-Ephreli kuya ku-August enkathini yokugcina esebenzayo ukukhula monstera, ngakho-ke kuyadingeka njalo ngemva kwamasonto amabili zalisa imbali.
Igumbi humidification, umoya uhlanzekile we-formaldehyde, ukugaya ngcono, nethonya ezuzisayo on yikhono lokubheka nesimiso sezinzwa - konke lokhu inani le sitshalo esimangalisayo, efana Monstera. Lokuzaliswa ke ngeke nilingenise nzima kakhulu, kodwa imbali inzuzo isobala.
Ukuze uthole ukwaziswa sendlela anakekele Cyclamen ekhaya
Ukucubungula strawberry entwasahlobo kusuka nezilokazane nezifo
Amaranth: ezikhula kwembewu
Uju agaric isobho - uju kusukela ebuntwaneni okude
Krasnodar Izibuyekezo baye bathutha yokuhlala unomphela
PLO - Iyini? Izimiso eziyisisekelo izinhlelo into ngamakhasimende
Inthanethi wezitolo "Trubkoved": ukubuyekezwa, ikheli, yesiqinisekiso
I ngehhoko inkukhu at-cottage
"ERobinson Crusoe": incwadi ukubuyekezwa. Defoe "The Adventures of eRobinson Crusoe": Ukubuyekeza